Miasa aminao ve ny asanao? Firy ny mpiasa? | Martech Zone
Miasa aminao ve ny asanao? Firy ny mpiasa?
Alakamisy, Septambra 6, 2007 Alatsinainy Martsa 18, 2013 Douglas Karr
Volana vitsivitsy lasa izay, tsy ho tratranao eo amin'ny latabatro aho raha tsy amin'ny 9 maraina na ho avy. Tsy hoe niasa tara aho… fa ny asako dia niasa tamiko mihoatra ny niasako azy. Azo inoana fa io no asa tsara indrindra hitan'ny olona teto afovoany andrefana. Ao amin'ny sehatry ny rindrambaiko dia tena mihaika ny olona aho mba hahita zavatra tsara kokoa. Izaho dia Product Manager niaraka tamin'ny iray amin'ireo orinasa mitombo haingana indrindra - tsy ny faritra ihany - fa ny firenena. Ny fitomboana haingana dia mitondra fanamby betsaka amin'izany.
Avy amin'ny fiaviana Production aho, ka ny ankamaroan'ny fahatsapako ny asa maoderina dia mbola miverina amin'ny lohan'ny injeniera ahy. Ny vokatra dia natao, namboarina, amidy ary tohanana. Tsotra fotsiny… mandra-panombohanao mitombo haingana. Raha tokony hanomboka ny tsipika fivoriambe vaovao ianao dia manampy olona hatrany amin'izany. Alao an-tsaina ange ilay alika silety misintona ilay mpitily. Manampia alika maromaro kokoa ary mpitaingina mpivady hafa ary ankehitriny dia mila mpitari-tafika sy mpitarika alika lehibe ianao. Manampia be loatra, na izany aza, ary tsy fantatry ny alika ny lalana tokony haleha ary very ny mason-tany.
Ny mahatsikaiky, mazava ho azy, dia ny fitomboana goavana dia iray amin'ireo toetra mampiavaka ny fahombiazan'ny orinasa. Tsy mandondona orinasa lehibe mihitsy aho - mandondona fotsiny miasa amin'ny orinasa lehibe. Tamin'ny tetezamita farany nataoko dia nifindra tamin'ny orinasa 200 mahery ho lasa orinasa 5 aho.
Amin'ny asako vaovao dia mety misy in-droa na intelo ny asa noho ny olona. Ny tsy fitoviana dia tsy misy miandry ny olon-kafa, na dia… mihazakazaka haingana haingana araka izay vitantsika isika rehetra hamongorana ny asa. Tsy misy sosotra, tsy misy miantsoantso… isika rehetra mifanampy amin'ny fampivoarana ny vokatra sy ny mpanjifanay handroso. Ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia lehibe tokoa, saingy mamela heloka tokoa izy ireo raha mbola mitazona ny fifandraisana amin'izy ireo izahay ary mampahafantatra azy ireo ny fivoarantsika.
Last faran'ny herinandro Nametraka rafi-telefaona PBX aho, tambajotra, tamba-jotra tsy misy tariby, namolavola ny mailaka voalohany, nandefa ny fampielezan-kevitray voalohany, nanoratra ny fepetra takiana amin'ny fanatsarana maro ny rafitray ho an'ny ekipa mpamorona roa, niasa mba hisakanana anay tsy hiditra amin'ny AOL Postmasters, nifindra ny birao avy amin'ny toerana taloha sy vaovao dia nanampy tamin'ny fampiharana mpanjifa vaovao vitsivitsy ary nandritra izany fotoana rehetra izany orinasan-telefaona olana.
Mety mihoatra ny azoko tamin'ny taona lasa tao amin'ny orinasa lehibe kokoa izany! Ny tiako holazaina eto dia tsy ny mandondona ny orinasa niasako - mbola mpanjifa aho ary manoro azy ireo ho tsara indrindra amin'ny indostria, bara tsy misy. Ny tiako holazaina dia ny hampifantoka ny saina amin'ny zava-misy fa ny ekipa kely sy mahaleo tena dia afaka mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha. Raha te-hahita fandrosoana ianao dia esory ny birao ary omeo hery ireo mpiasanao hahomby.
Ohatra iray novakiako taona maro lasa izay dia ny WL Gore, ilay orinasa namorona Gore-Tex.
Gore dia voatonona ho anisan'ny "Orinasa tsara indrindra 100 hiasa any Amerika", amin'ny alàlan'ny magazine FORTUNE, ary ny kolontsainay dia modely ho an'ireo fikambanana ankehitriny mitady fitomboana amin'ny alàlan'ny famoahana ny famoronana sy ny famporisihana ny fiaraha-miasa.
Ireo mpitarika ao Gore dia nahita toerana nitombo nihoatra ny isan'ireo mpiasa nampihena ny famoronana ary nampihena ny famokarana. Raha tokony hampitombo ny orinasa i Gore, dia hanangana orinasa 'vaovao' fotsiny, hitaratra ny tsipika vokatra sy ny firafitry ny fandaminana isaky ny toerana. Ankehitriny dia manana mpiasa 8,000 mahery izy ireo amin'ny toerana 45. Raha manao ny matematika ianao, dia eo amin'ny 177 eo ho eo ny mpiasa isaky ny toerana - isa isa azo tanterahina tokoa.
Ny rindrambaiko ankehitriny dia mirona amin'ity rafitra ity. Tsy ilaina ny manana ekipa fampandrosoana goavambe mitaingina ny tenany hamolavola fampiharana goavambe miaraka amin'ny bibikely miafina sy sosona ary sosona manahirana. kosa, SOA mitaiza ekipa kely sy mahaleo tena. Ny ekipa tsirairay dia afaka manamboatra vahaolana sarotra… ny hany fahita mahazatra dia ny fifampiresahan'ireo ampahan'ny fampiharana.
Tsara ny fiainana amin'ny bitika orinasa. Izahay izao dia mandray famatsiam-bola ankehitriny (aza misalasala mifandraisa amiko raha mpampiasa vola matotra ianao) ary misokatra malalaka ny indostria. Mety tsy hanaiky ny sasany, saingy tsy mino aho fa manana mpifaninana tokana sy mahay isika. Mifanentana sy tafiditra amin'ny vahaolana tsara indrindra amin'ny indostria izahay… mampiasa mailaka, SMS, Voiceshot, Fax, Web ary pos teknolojia hanamafisana ny fifamatorana sy ny tombom-barotra ho an'ny indostrian'ny trano fisakafoanana.
Soa ihany, mahia isika, ratsy toetra ary mandeha amin'ny hafainganam-pandeha mahavariana. Nametraka fifandraisana amin'ireo orinasa hajaina indrindra amin'ny indostrian'ny Restaurant, Web, Search ary Marketing izahay. Antsika ny indostria handraisana ary manana tetika sy mpitarika izahay hamita izany. Ary tsy mikasa ny handray mpiasa ato ho ato izahay.
Androany, miasa ny asako aho - tsy avelako hiasa amiko. Izaho dia ao amin'ny birao amin'ny 8 maraina ary miasa 10 ka hatramin'ny 20 ora tsara isan-kerinandro tsara noho ny tamin'ny herintaona lasa izay. Satria mahazo asa be dia be aho, faly aho ary mamokatra. Manantena aho fa tsy ho tonga amin'ny mpiasa 177 ato ho ato… raha tsy manapa-kevitra ny hiala toerana vaovao izahay!
Tags: hierarchy momba ny asafikambananaFirafitry ny fandaminanaStructure
Sep 10, 2007 amin'ny 9: 52 AM
Lahatsoratra lehibe. Mieritreritra an'izany matetika aho satria miasa amin'ny orinasa lehibe iray aho, fa amin'ny fotoana malalaka dia mitantana fanombohana tranonkala kely sy bilaogy vitsivitsy. Data Governance no ataoko isan'andro, fa tiako ny fanombohana satria mahazo tsiro ny ampahany rehetra amin'ny orinasa ianao.
Sep 10, 2007 amin'ny 9: 53 AM
Tsapako fotsiny fa diso ny URL-ko aho….